Hlola iLas Vegas, Usa - World Tourism Portal
Hlola iLas Vegas, Usa
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili eziphezulu eLas Vegas, Usa
Okufanele ukwenze eLas Vegas
Uhambo losuku kusuka eLas Vegas
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeLas Vegas
Bukela ividiyo ngeLas Vegas
Hlola idolobha elikhulu kunawo wonke esifundazweni sase-Nevada sase-US. I-Las Vegas iyinhloko Yokuzijabulisa Yomhlaba. Hlola iLas Vegas, idolobha elinezindawo eziningi zehhotela Mega-hoteli / amakhasino ahlotshiswe ngokunakekelwa okuphezulu nokunakwa imininingwane edala indawo efana ne-fantasy. Amakhasino ahlala enamagama nezindikimba ezivusa izithandani, imfihlakalo, nezindawo ezihlukile.
ILas Vegas inesimo sezulu esomile esinehlobo, elomile nelishisa ngokweqile. Ebusika, ukupela okubandayo kungahle kube khona izinsuku eziningana. Izinyoni zasehlobo zivela ngasekupheleni kukaJulayi kuya ekuqaleni kukaSepthemba.
Uma kuqhathaniswa namanye amadolobha asentshonalanga ye-US, iLas Vegas (ngokwezwi nezwi, “izitebhisi” ngeSpanishi) ukufika okusanda kwenzeka. Yasungulwa e-1905, futhi kwaphela iminyaka eminingi kwakuyindawo encane yokuhlala phakathi enkangala. Kodwa-ke, imicimbi eminingi ebaluleke kakhulu izohlangana ndawonye esikhathini esingaphansi kweminyaka engamashumi amabili ezizosiza iLas Vegas ukuba ikhule ibe yilokho eyikho namuhla.
Isikhungo sezindiza saseNyakatho Las Vegas sisebenzela ukusebenza okuningi kohambo lomoya kanye nezinye izindlela zendiza ezijwayelekile. Kuyisikhumulo sezindiza esiphambili kunazo zonke eVegas, kanye nesikhumulo sezindiza esiphambili kunazo zonke ezweni laseNevada.
Uma uhlela kakhulu ukubhekabheka ngasekhasino elilodwa futhi isikhathi sakho eVegas sifushane, ungahle ufune ukuyihlola ngokuphelele imoto eqashisayo bese uthatha nje amatekisi noma amabhasi weStrip. Ngakolunye uhlangothi, imali yokugibela amatekisi nokuhamba ngebhasi yengeza ngokushesha, futhi ngokuqashwa kwezimoto kushibhile kakhulu, noma ngubani ohlala izinsuku ezimbalwa noma ezinde angafanelwa kangcono nokuguquguquka kwemoto. Ezinye zezinto ezinhle kakhulu (isib. Idamu lase Hoover) zitholakala ngaphandle kweLas Vegas futhi zidinga ukuthi ushayele kulezo zivakashi. Uma udinga noma ungaqhubeka phambili (isib., Ngaphandle kwesimo), qiniseka ukuthi isivumelwano sakho sokuqasha siyakuvumela kanye nokwabelana ngemisebenzi yokushayela.
Kunamahhovisi amaningi okuqasha izimoto ku-Strip, okwenza kube lula kakhulu ukuqasha imoto ehhotela lakho uhambo losuku. Ngisho ungayiqasha imoto kwi-intanethi kusuka kuSixt. Khumbula ukuqasha ngaphambi kwesikhathi ngoba kungaba matasa phakathi nezimpelasonto nangemihlangano emikhulu.
Ibonisa ukubukwa eLas Vegas
Kungumthetho we-Federal ukuthi bonke abagembuli kumele okungenani babe neminyaka eyi-21.
Iningi lamakhasino linikeza ama-ATM kanye nezindawo ezisetshenziselwa ukonga imali ngaphezulu, kepha qaphela ngamacala asethelwe yibhange lakho noma opharetha umshini noma osunguliwe. Ama-ATM kumakhasino angakhokhisa imali enkudlwana yokukhishwa.
I-Fashion Show Mall, i-3200 S Las Vegas Blvd; inikeza cishe zonke izitolo ezinkulu nezimakethe zase-US. Ibuye inikeze abanye abaningi abavame ukuhlotshaniswa nabaklami abakhulu, kanye nenkundla enkulu yokudla nezindawo zokudlela eziningana ezinhle, zonke ezisendlini ebiyelwe ngokuphelele, enomoya. Indawo ezitolo ezinkulu eziseduzane ebhekene neStrip imbozwe ngumthunzi omkhulu wesiliva obizwa ngokuthi “iCloud” ngakho-ke kunzima ukungaphuthelwa. Ifaka indawo yokupaka ebanzi, embozwe mahhala evame ukuba matasa kakhulu ntambama.
I-Town Square, i-6611 S Las Vegas Blvd. Cishe isigamu semayela ngaseningizimu yeMandalay iyindawo enkulukazi engaphandle kwedolobha laseMedithera futhi ivelele phakathi kwazo zonke ezinye izitolo ezinkulu ezinomoya. Umqondo wokuthenga ovulekile ehlobo ehlobo ogwadule ungahle ubonakale uhlanya ekuqaleni, kepha inethiwekhi ebanzi yezihlahla, izihlahla zomthunzi kanye neziqhumane zamanzi zivumela ujabulele impela ilanga lasemini ngaphandle. Futhi njengoba kunjalo, amazinga okushisa e-Las Vegas 'awafani nokushisa okujwayelekile ngezikhathi zokuwa, ubusika nentwasahlobo. Zonke izitolo zokudlela kanye nezindawo zokudlela lapha zinezakhiwo zazo ezihlukile- noma ezimbili-izindaba. "Idolobha" empeleni limile esigcawini sangempela sedolobha esinezihlahla, u-ayisikhilimu nezindawo zekhofi namabhentshi ukuze aphumule.
Izitolo Zesithangami, i-3500 S. Las Vegas Boulevard (eCaesars). Indawo enkulu yokuthenga ethengisa futhi enikezela ngemibukiso yamahhala ye-animatronics eFountain of the Gods nase-Atlantis esekupheleni kwezitolo.
I-Grand Canal Shoppes, i-3377 South Las Vegas Boulevard (eVenetian). Enye indawo enkulu yezitolo enesitolo se-tacky objets d'art esifakwe engxoxweni kaMartin Bashir noMichael Jackson.
Izitolo zeMiracle Mile ePlanet Hollywood, 3663 S. Las Vegas Blvd. I-10: 00am - 11: 00pm: ISonto - uLwesine, 10: 00am - phakathi kwamabili: uLwesihlanu - uMgqibelo. Vula unyaka wonke, kufaka phakathi amaholide. Amahora wokudla nawebha ayahluka. Ngaphezu kwezitolo ezikhethekile ze-170, izindawo zokudlela ze-15 nezindawo ezintathu zokuzijabulisa bukhoma, Izitolo zeMiracle Mile futhi zibonisa umbukiso wemithombo yamadola ezigidi eziningi nesiphepho semvula yangaphakathi. hlela
Ezimbili ezikhulukazi nezihlonishwayo izikhungo zaseLas Vegas Premium Outlets. Zombili zingelokuthengwa kwePremium Outlets, okuyingxenye yeSimon Property Group. Le eseningizimu ekuqaleni yaqalwa ngokuzimela ngenye inkampani njengeLas Vegas Outlet Center futhi namanje isachazwa lelo gama ezincwadini zabaqondisi abadala zokuhamba. Bobabili bahlanganyela iningi labaqashi abafanayo. Enyakatho inezinhlobo ezimbalwa zomklami ongatholakali ezinganeni zakwabo eziseningizimu, njenge-Armani Exchange, iBurberry, iDolce & Gabbana, i-Elie Tahari, iKate Spade, iSalvatore Ferragamo, iSt. Isitolo se-Saks Fifth Avenue Off 5th.
Izitolo zase-Las Vegas Premium Izitolo - ENyakatho, 875 South Grand Central Parkway. Esangweni leDowntown - umklami we-150 kanye nezitolo ezidayisa igama kusilungiselelo esingaphandle. hlela
Izitolo zaseLas Vegas Premium - South, 7400 Las Vegas Boulevard South (amamayela ambalwa S weMandalay Bay). Izitolo ezikhipha i-140 zilungiselela ukuhlelwa kwangaphakathi okugcwele nezinkantolo ezimbili zokudla. hlela
Amakhasino amakhulu azonikela ngezinketho zokudla ezahlukahlukene, ezisukela endaweni yokudla ekhona ye-omni kuya kumakhofi amancane alula ezindaweni zokudlela zama-gourmet.
Ama-Buffets athandwa kakhulu eLas Vegas futhi idolobha linenqwaba yawo. Zithandwa ngabantu bendawo nezivakashi ngokufanayo. Ama-buffet amahle kakhulu asebenzisa cishe i $ 30 yomuntu ngesidlo sasebusuku sangempelasonto. Ukudla kwasemini kuyinani elingcono kakhulu kuma-buffet amaningi njengoba ngokuvamile kuyingxenye yamanani kodwa kusetshenzelwa ezinye izinhlobo ezifanayo zokudla ezingatholakala ngezikhathi zokudlela. Ukudla kwasekuseni kubiza kakhulu futhi kuvame ukusakazeka okuhle. Ungakhohlwa ukuthi ukufaka isikhonzi sakho se-buffet 10-15% kuyisiko. Ungashiya imali etafuleni ekugcineni kokudla kwakho noma ucofe i-cashier ekhawunteni ekhadini lesikweletu.
E-Las Vegas, iziphuzo zamahhala zinikezwa bonke ababheja ukuthi ngabe bayadlala imidlalo yetafula noma abaseshi banoma iyiphi ihlelo. Kufanele ukhiphe isikhonzi okungenani esingu- $ 1 isiphuzo ngasinye. Ukwehluleka ukwenza njalo kuzoba nomphumela wokuthi umlindi akuvakashele kaningi, futhi avakashele labo abavame ukuhola.
Ama-nightclub / ukudansa
Kukhona iklabhu noma indawo yokuphumula cishe kuwo wonke amahhotela namakhasino. Amakilabhu amaningi ahlala evulekile kuze kube yi-4AM, amakilabhu ahlukahlukene avela emuva kwehora atholakala kubahlanganyeli abanzima ngempela. Amanani entengo yokuphuza angahluka noma kuphi ukusuka ku- $ 4-8 ngebhodlela likabhiya elihlala ekhaya, $ 8-10 ngeziphuzo ezenziwe kahle ezenziwe ngotshwala abujwayelekile, kanye ne- $ 200 noma ngaphezulu ibhodlela lemimoya. Amakilabhu ahlala ematasa ngezimpelasonto, futhi angagcwala phakathi nezinsuku ezindaweni ezine-Service Industry Night (SIN), imvamisa ngoLwesibili kuze kube uLwesine, lapho abantu bendawo abasebenza embonini yezinkonzo bengavuki ebusuku.
Ukushisa ngokweqile nokuphelelwa ngamandla
Lindela umswakama ophansi kakhulu futhi amazinga okushisa angaphezu kwe-105 ° F (40 ° C) ngoMeyi kuze kube uSepthemba. Letha i-sunscreen bese ugqoke izingubo ezigqamile, ezinombala okhanya kahle ukukhanya kwelanga. Gwema ukomisa ukuphuza uketshezi oluningi.
Kuwo wonke amakhasino amakhulu (ngokuvamile lawo makhasino adlula imishini yama-slot ye-15), amaklabhu wokuvula kanye nemigoqo emile engakusebenzisi ukudla, ukubhema kuvunyelwe. Kumakhasino amakhulu, kunezindawo ezingenawo umusi, kepha zingasondela kakhulu ezindaweni zokubhema. Amakamelo we-poker ngokuvamile awabhemi. Imidlalo yetafula elingenamusi kanye nezindawo ezi-slot nazo ziyatholakala. Izindawo zokudlela ngaphakathi kwamakhasino akuwona okubhema. Ama-nightclub kanye nama-lounges angavumela ukubhema uma kungakuphathi ukudla.
Kuzo zonke ezinye izindawo zokudlela ezimile, imigoqo, izitolo ezilula, izitolo zokudla kanye nezikhungo zezindiza ukubhema kuvinjelwe kuzo zonke izikhungo ezithengisa ukudla ngaphandle kokudla okukhona ngaphambili.
Idamu laseHoover litholakala eduzane neBoulder City.
Ukukhuphuka kwamatshe nokuhamba ngezinyawo. Izintaba Zentwasahlobo, Enyakatho yeRed Rock Canyon. Iziqongo ezinhlanu ngaphezulu kwe11,000 ′ okuyiBristlecone Pine County. E-11,918 ft (3,362 m), Mt. UCharleston ufinyelela indawo engenalutho ye-alpine futhi uphakeme wesine ukuphakama. I-geology ngokuyinhloko i-limestone enisa imvula futhi iqhwa iqhwa bese ikukhipha emigodini ephansi. Phatha amanzi amaningi okuhambela phezulu ezintabeni. Lindela iqhwa ezindaweni eziphakeme ngo-Okthoba kuya ngoMeyi noma ngoJuni.
ILake Mead National Recurity Area - ihora elilodwa nemizuzu engamashumi amabili enyakatho-empumalanga ngemoto. Iziphethu ezishisayo.
IGrand Canyon imayelana namahora we-4 ngemoto, ngeDamu leHover.
IMount Whitney, ephakeme kakhulu i-US ngaphandle kwe-Alaska. Cishe amahora amabili ngaphesheya kwe-Death Valley.
IZiyoni National Park icishe ibe ngamahora amathathu empumalanga yeVegas futhi inendawo enhle emgodini obomvu obiyelwe.
I-Las Vegas Ski ne-Snowboard Resort, (ezintabeni zaseNtwasahlobo, efinyelelwe yi-State Highway 156). Amaminithi we-45 asuka eLas Vegas.
Brian Head Resort, (eningizimu ye-Utah). Inikeza izinyawo eziqonde phezulu, kodwa cishe ihora lamahora nge-I-15.
Indawo yaseCharleston ski ebusika, inyukela endaweni eyi-Alpine ehlobo. 35 amamayela asenyakatho nentshonalanga yeLas Vegas.
I-Bootleg Canyon, (eduzane neBoulder City, thatha umgwaqo omkhulu u-93). ihlinzeka ngokuhamba phambili kwezobuchwepheshe nezwe lokuhamba ngomgwaqo. Amaminithi we-30 eningizimu ye "Strip".
Blue Blue, (eseningizimu yeRed Rock Canyon). Ukugibela kancane kwezobuchwepheshe, kepha ngokubukwa okumangazayo.
Izintaba eziMhlophe (eCalifornia) zifaka iHlathi leBristlecone Pine Forest. Ukufika lapho, thatha i-US-95 ne-SR 168 ukuya eWestgard Pass, bese umgwaqo ugwedliwe kuze kufike eShulman Grove e-10,000 ft, ​​amatshe aqonde kuPatriarch grove ngezansi komugqa nje.
I-Death Valley amahora amabili entshonalanga ngemoto.
Ugwadule Lukazwelonke Wezilwane Zasendle, ukukanisa okwakudala kuma-1,588,459 acres eMohave Desert. Hlela eceleni ikakhulukazi imvu yasogwadule eyi-bighorn, i-23 miles enyakatho neLas Vegas e-US 95.
IGreat Basin National Park inezindawo zokugcina izintaba zaseNevada kuphela nezinye izindawo ezinhle kakhulu zezintaba, iBristlecone Pines, ukuvakasha komhume ngezihlahla ezinama-stalactites njll North North e-US-93 kuya e-Ely, empumalanga e-US-50.
I-Valley of Fire State Park ihora elilodwa enyakatho-empumalanga ngemoto. Kodwa-ke, phawula ukuthi umgwaqo omkhulu usakhiwa, ngakho-ke ukushayela inyakatho usuka eLake Mead kuzongeza amahora amabili okungeziwe ukuze uhambe nge-4 mi (6 km).
Amakhodi we-Promo: Amakhodi wephromo weselula wamahhotela amaningi eLas Vegas atholakalayo eLasVegas.im. Lawa amakhodi wephromo lehhotela futhi kufanele abhukelwe ngqo nehhotela ngalinye.
e-Los Angeles imayelana namahora we-4 ngemoto.
IMesquite yindawo enhle yokuphumula emngceleni weNevada-Arizona eduze nase-Utah. Cishe amahora we-1.25 ngemoto.
ISedona, Arizona, idolobha lezokuvakasha leNew Age ku-sandwich canyon ebomvu. Cishe amahora we-4.5 ngemoto.